ကမ္ဘောဒီးယား (127) ဗီယက်နမ် (122) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (113) ထိုင််း (102) မြန်မာ (75) တရုတ် (45) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (10) အင်ဒိုနီးရှား (10) မလေးရှား (10) ဖိလစ်ပိုင် (10) စင်္ကာပူ (10) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (8) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (8) တီမော လက်စ်တေ (8) Global (7) ဟောင်ကောင် (3) အိနိ္ဒယ (3) ဂျပန် (3) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (3) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (3) သီရိလင်္ကာ (3) မွန်ဂိုးလီးယား (3)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (169) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (17) ခမာဘာသာစကား (10) လာအို (8) ဗမာဘာသာစကား (3) ထိုင်း (3) တရုတ် (1)
ရေအရင်းအမြစ်များ (194) မြစ်ချောင်းများ နှင... (45) ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအ... (44) ရေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ... (37) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (35) ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ... (34) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (19) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (19) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (19) စိုက်ပျိုးရေး (16) မြေအောက်ရေ (14) စွမ်းအင် (13) SDG6Clean water a... (12) ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည... (10) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (9) ဥပဒေရေးရာမူဘောင်များ (9) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း... (9) မြေယာ (8) လူထုအခြေပြု ငါးဖမ်း... (7) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (6) ရေကြောင်းလမ်းများ န... (6) အကြီးစား နှင့် အသေး... (6) သင့်လျော်အောင် စီစဉ... (5) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (5) ဇီဝမျိုးကွဲများ (5) ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငါ... (5) ကျေးလက်ရေထောက်ပံ့မှု (5) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (5) အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ (4) ဂေဟစနစ်များ (4) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (4) ရေလွှမ်းမိုးမှုများ (4) လူဦးရေ (4) ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြ... (4) သန့်ရှင်းသော ဖွံ့ဖြ... (3) ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆေ... (3) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်... (3) ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လု... (3) နိုင်ငံခြားသား ရင်း... (3) ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခ... (3) ကမ္ဘာ့ဘဏ် (3) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျ... (2) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (2) မိုးခေါင်ရေရှားမှု (2) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (2) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (2) သစ်တောများ နှင့် သစ... (2) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (2) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (2) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (2)
ခေါင်းစဥ်များ: Water resources
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, Global, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Conference/workshop proceedings and presentations International Annual UN-Water Zaragoza Conference 2013 2013 ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု, ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Analysis, discussion papers, and blogs Mervyn Piesse, Research Manager, Global Food and Water Crises... 2020 ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ
သိရှိနားလည်ထားမှု အခြေအနေ “မဲခေါင်ဒေသရှိ အမျိုးသမီးများ နှင့် မြစ်များ”
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Karen Delfau, Pichamon Yeophantong 2020 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါဝင်သောအမျိုးသမီးများ, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, ရေအရင်းအမြစ်များ
သိရှိနားလည်ထားမှု အခြေအနေ-“မဲခေါင်ဒေသရှိ အမျ ိုးသမီးများ နှင့် မြစ်များ” အစီရင်ခံစာ သည် မဲခေါင်ဒေသရှိ မြစ်များတွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော လူမှုပတ်၀န်းကျင် နှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်...
Global Archived web content J-M. Faurès 1997 ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု, ရေအရင်းအမြစ်များ
Information on quantity and quality of natural resources is essential for sustainable agricultural development. In particular, information on freshwater resources, their...
Global Archived web content NASA ရေအရင်းအမြစ်များ
Global Archived web content UN-WATER 2013 ရေအရင်းအမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) WLE Greater Mekong, Hecht, J. and Lacombe, G 2014 ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, ရေအရင်းအမြစ်များ, အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများ
A research paper by Hecht, J. and Lacombe, G on The effects of hydropower dams on the hydrology of the Mekong Basin published in 2014 by CGIAR Research Program - WLE Greater...
ကမ္ဘောဒီးယား, ဗီယက်နမ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ထိုင််း, မြန်မာ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ratha Chea, Gaël Grenouillet, Sovan Lek, CNRS, Université Toulouse... 2016 ခရီးသွားလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း, သန့်ရှင်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ, အကြီးစား နှင့် အသေးစား ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ